Ikholeji yase-Saint Anselm: Izikolo ze-SAT, i-Tuition, Admit Rate
Izikolo ze-SAT, Imilinganiselo ye-Acceptance, i-Tuition, Rate Rate and More
I-Admissions ye-College yase-Saint Anselm.
Abafundi abanomdla wokufaka isicelo kwi-Saint Anselm baya kufuneka bafake isicelo (isicelo esiqhelekileyo samkelwe), iimpendulo zesikolo esiphakamileyo, kunye neengcebiso ezivela kumcebisi ootitshala / esikolweni. I-SAT kunye ne-ACT izikolo zikhethiweyo, kwaye abafake izicelo abafunwa ukuba bangenise. Ukuze ufumane imiyalelo epheleleyo kunye nezikhokelo zokufaka isicelo, kubandakanywa imithendeleko kunye nolunye ulwazi olubalulekileyo, qi niseka ukutyelela iwebhusayithi ye-Saint Anselm.
Isikolo samkela u-76% wabenzi bezicelo ngo-2016, okwenza kube lula ukuba kufumaneke kuninzi lwabo abasebenzisa unyaka ngamnye.
I-Saint Anselm College Ukwamkelwa kweeKholeji: 76%
ISAT Math: 530/610
Iifomati ze-SAT zeNew Hampshire
UMSEBENZI IsiNgesi: 22/27
UMTHETHO UMathe: 22/28
Iikholeji ze-ACT yaseNew Hampshire
I-Saint Anselm College Inkcazo:
Eyasungulwa ngo-1889, i-Saint Anselm College yi-private college, yamaKatolika, iikholeji zobugcisa be-liberal esecaleni lasentshona laseManchester, eNew Hampshire. I-campus ye-acra 500 i malunga neyure ukusuka eBoston. Abafundi base-Saint Anselm bavela kumazwe angama-31 kunye namazwe angama-8, kwaye banokukhetha ukusuka kuma-36 amakhulu kunye nabantwana abangama-23.
Amashishini kunye nabongikazi bathandwa kakhulu. Abafundi abaphumeleleyo kufuneka bajonge kwiNkqubo ye-Honours kwikharityhulam ephuculweyo ngamathuba ophando oluzimeleyo kunye nomsebenzi osondeleyo kunye nabacebisi bee-faculty. Izifundo ziyaxhaswa ngumlinganiselo ophilileyo we-12 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty. Ngomzimba womfundi ohlala kuyo, impilo ka-Saint Anselm yenkampu isebenza kunye namaqela angaphezu kwama-80 kunye nemibutho yabafundi.
Kwiimidlalo, i-Saint Anselm Hawks ikhuphisana kwiCandelo le-NCAA II II-northeast-10. Iikholeji zeekholeji ezili-10 kunye nemidlalo yabasetyhini aba-10.
Ubhaliso lwabonke: 1,930 (yonke i-grade-graduate)
Imfundo kunye neMali: $ 39,036
Igumbi neBhodi: $ 13,734
Iindleko ezipheleleyo: $ 55,270
I-Saint Anselm College Financial Aid (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 21,317
Imali: $ 9,559
I-Popular Majors: I- shishini, Ubulungisa boLwaphulo-mthetho, isiNgesi, iMbali, iNyango, iNzululwazi
Ireyithi yoNyaka weSifundo seMinyaka eyi-6: i-72%
Imidlalo Yabantu: Ibhola, iGalofu, iHockey Hockey, iLacrosse, i-Baseball, ibhola lebhola, ithenti
Ezemidlalo zaBasetyhini: IHockey yeHlabathi, i-Skiing, iChola, iBhola yeBhola, iVolleyball, iLizwe eliPhambukayo
Ukuba uthanda iKholeji yase-Saint Anselm, Unokuphinde uthanda ezi zikolo:
IYunivesithi yaseRivier: iProfayili
Ikholeji yokuFundisa: iProfayili
Indlela yokufumana iNtloko yeNcwadi okanye iNdaba emfutshane